Waaxda socdaalka oo baaritaan ku sameynaysa labo qof oo u dhashay Burundi | Star FM
Home Wararka Kenya Waaxda socdaalka oo baaritaan ku sameynaysa labo qof oo u dhashay Burundi
Waaxda socdaalka oo baaritaan ku sameynaysa labo qof oo u dhashay Burundi
Waaxda socdaalka ee dalka ayaa baaritaano ku hayso labo qof oo dhalasho ahaan ka soo jeedo wadanka Burundi oo galinkii hore ee shalay lagu qabtay ismaamulka Migori.
Taliyaha booliska ee deegaanka galbeedka Kuria Cleti Kimaiyo ayaa sheegay in eedeysanayaasha loo haysto inay wadanka si sharci darro ah ku soo galeen.
Ciidamo batrool sameynayay ayaa labada qof ka qabtay goob laga raaco baabuurta u kala gooshta Migori iyo Isebania.
Mr. Cleti ayaa intaa ku daray in aan la ogeyn halka ay tuhmanayaasha ku wajahnaayeen.
Waxaa uu taliyuhu dhanka kale xusay inay sii socon doonaan howlgallada ka dhanka ah ajaaniibta yimaada Kenya iyagoo aan sidan dokumeentiyada muhiimka ah.
Tani ayaa imaanaysa iyadoo warbixin ay horay u soo saareen laamaha ammaanka lagu sheegay in bilooyinkii ugu dambeeyay ay Kenya soo gaarayeen qaar ka mid ah shacabka dalka Burundi oo magan-galyo doon ah.
Previous articleDHAGEYSO:William Ruto oo taliyaha guud ee booliska ugu baaqay inu faraha kala baxo siyaasadda
Next articleDHAGEYSO:Madax soo dhaweysay in la hakiyay soo xulista qaadiyada dalka